Etu ị ga - esi amata ndị ahịa B2B gị na Ngwaọrụ Ngwaọrụ | Martech Zone
Tuzdee, Machị 31, 2020 Tuzdee, Machị 31, 2020 Emily Johnson
A na-ahụta ụlọ ọrụ B2C dị ka ndị na-agba ọsọ n'ihu na atụmatụ nyocha ndị ahịa. Channelszọ dị iche iche dịka e-commerce, mgbasa ozi mmekọrịta, na azụmahịa azụmaahịa enyerela ụdị azụmaahịa a aka ịkọ ahịa ma nye ndị ahịa ọmarịcha ahịa. Karịsịa, data sara mbara na nyocha dị elu site na usoro mmụta igwe na-enyere ndị B2C ndị na-eme atụmatụ aka ịmata omume ndị ahịa na omume ha site na sistemụ ịntanetị.
Mmụta igwe na-enyekwa ikike ị nweta iji nweta nghọta banyere ndị ahịa azụmaahịa. Agbanyeghị, ụlọ ọrụ B2B kuchiri ya amalitebeghị. N'agbanyeghị na-eto eto nke igwe mmụta, a ka nwere ọtụtụ ihe mgbagwoju anya banyere otú ọ dabara na nke ugbu a nghọta nke Ọrụ ndị ahịa B2B. Yabụ k'anyị kpochapụ ya taa.
Igwe na-amụ igwe iji ghọta ụkpụrụ nke omume ndị ahịa
Anyị maara na mmụta igwe bụ naanị otu algọridim emere iji mimomie ọgụgụ isi anyị na-enweghị iwu doro anya. Na, usoro a kachasị dị nso na otu anyị si amata usoro na mmekọrịta ndị gbara anyị gburugburu wee rute nghọta ka elu.
Ihe omuma ihe omuma nke B2B gbasoro ihe omuma di omimi dika nha ulo oru, ngbata, isi ego ma obu ndi oru, na ụdị ụlọ ọrụ nke akara SIC mebere. Ma, ngwa ọrụ akụrụngwa eji arụ ọrụ na-enyere gị aka iji ọgụgụ isi kewaa ndị ahịa dabere na ozi oge.
Ọ na-achọpụta nghọta dị mkpa gbasara mkpa ndị ahịa, omume, mmasị, na akparamagwa gbasara ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị ma jiri nghọta ndị a wee bulie ahịa na ọrịre ahịa dị ugbu a.
Learningmụta Ngwaọrụ maka Ngalaba Data Ndị Ahịa
Site n'itinye ihe omuma banyere ihe omuma ndi mmadu nile anyi na-achikota site na omume ha na weebụsaịtị anyi, ndi ahia nwere ike ijikwa ma ghota usoro ndu nke onye zụrụ ahia, ahia n'oge, mepee mmemme iguzosi ike n'ihe, mepụta nkwukọrịta ahaziri iche na nke dị mkpa, nweta ndị ahịa ọhụrụ na jigide ndị ahịa bara uru ruo ogologo oge.
Nkuzi igwe n’eme ka ngalaba di elu di nkpa maka idozi onwe mmadu. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ụlọ ọrụ B2B gị nwere ihe mgbaru ọsọ nke nụchaa ahụmahụ ndị ahịa ma na-ekwusiwanye mkpa nke nkwukọrịta ọ bụla, nkewapụta nkewa nke ndị ahịa nwere ike ijide isi.
Agbanyeghị, ka nke a mee, ịkwesịrị idobe otu nchekwa data dị ọcha nke mmụta igwe nwere ike rụọ ọrụ na ya na-enweghị nsogbu ọ bụla. Yabụ, ozugbo inwere ndekọ dị ọcha dị otu a, ịnwere ike iji mmụta igwe kesaa ndị ahịa ahụ dabere na njirimara enyere n'okpuru:
Mkpa / ngwaahịa dabere na njirimara
Mmụta Ngwaọrụ ịkwado Atụmatụ ndị dabere na Trends
Ozugbo i kewara nchekwa data ndị ahịa, ị ga-enwe ike ikpebi ihe ị ga-eme dabere na data a. Lee otu ihe atụ:
Ọ bụrụ na puku afọ iri na United States na-eleta ụlọ ahịa na ntanetị, tụgharịa na ngwugwu iji chọpụta ọnụọgụ shuga na akara nri, wee pụọ na-enweghị ịzụta, mmụta igwe nwere ike ịmata ụdị omume a ma chọpụta ndị ahịa niile mere omume ndị a. Ndị ahịa nwere ike ịmụta ihe site na data dị adị dị otú a ma mee ihe kwekọrọ na ya.
Mmụta Ngwaọrụ na-enyefe ndị ahịa ọdịnaya ziri ezi
Na mbu, irere ndị ahịa B2B gụnyere iwepụta ọdịnaya nke na-ewepu ozi ha maka mmemme nkwado n'ọdịnihu. Iji maa atụ, na-arịọ ndu iji dejupụta mpempe akwụkwọ iji budata naanị akwụkwọ E ma ọ bụ rịọ maka ngosi ngwaahịa ọ bụla.
Agbanyeghi na ọdịnaya dị etu a nwere ike ijide ndu, ọtụtụ ndị ọbịa na webụsaịtị anaghị achọ ịkekọrịta akara email ma ọ bụ akara ekwentị ha iji lelee ọdịnaya ahụ. Dị ka Nchoputa nke nyocha Manifest, 81% nke ndị mmadụ ahapụla ụdị ntanetị mgbe na-ejuputa ya. Yabụ, ọ bụghị ụzọ a ga-akwụ ụgwọ iji mepụta ndu.
Mmụta igwe na-enye ndị na-ere ahịa B2B ohere inweta ogo sitere na weebụsaịtị na-achọghị ka ha mezue ụdị ndebanye. Iji maa atụ, ụlọ ọrụ B2B nwere ike iji igwe na-amụ iji nyochaa akparamagwa webụsaịtị omume onye ọbịa ma gosipụta ọdịnaya na-akpali akpali n'ụzọ nke ahaziri iche n'oge kwesịrị ekwesị na akpaghị aka.
Ndị ahịa B2B na-eri ọdịnaya abụghị naanị dabere na mkpa ịzụrụ kamakwa na isi ihe ha nọ na njem ịzụta. Ya mere, igosipụta ọdịnaya na isi ihe mmekọrịta onye na-emekọrịta ihe ma kwekọọ na mkpa ha na ezigbo oge ga-enyere gị aka inweta ọnụọgụ kachasị nke ndu na obere oge.
Ngwaọrụ Igwe Na-elekwasị Anya na Ọrụ Onwe Onye Ahịa
Ọrụ onwe onye na-ezo aka mgbe onye ọbịa / ndị ahịa hụrụ nkwado ahụ
N'ihi nke a, ọtụtụ ụlọ ọrụ abawanyela onyinye ha na-enye maka ọrụ onwe ha iji nyefee ahụmịhe ndị ahịa ka mma. Ọrụ onwe gị bụ ihe eji eme ihe maka ngwa mmụta igwe. Ndị na-akparịta ụka, ndị enyemaka na-enyere aka, na ọtụtụ ngwaọrụ ndị ọzọ nwere nkwalite AI nwere ike ịmụ ma mụta mmekọrịta dị ka onye na-ahụ maka ndị ahịa.
Ngwa ọrụ onwe gị na-amụta site na ahụmịhe gara aga na mmekọrịta iji rụọ ọrụ dị mgbagwoju anya karịa oge. Ngwaọrụ ndị a nwere ike ịgbanwe site na ịme nkwukọrịta dị mkpa na ndị ọbịa webụsaịtị iji bulie mmekọrịta ha, dị ka ịchọpụta mmekọrịta n'etiti esemokwu na azịza ya.
Ọzọkwa, ụfọdụ ngwaọrụ na-eji mmụta miri emi eme ihe iji na-emeziwanye ihe mgbe niile, na-eme ka ndị ọrụ nweta enyemaka ziri ezi.
Ọbụghị naanị nke a, mmụta igwe nwere ngwa ndị ọzọ dị iche iche. Maka ndị na-ere ahịa, ọ bụ igodo ziri ezi iji mụta akụkụ ndị ahịa dị mgbagwoju anya na nke dị oke mkpa, omume ha, na otu esi esonyere ndị ahịa ahụ n'ụzọ dị mkpa. Site n’inyere gị aka ịghọta akụkụ dị iche iche nke ndị ahịa, teknụzụ ịmụ igwe nwere ike ịrụ ụka adịghị ya na ụlọ ọrụ B2B gị ga-enwe ọganiihu enweghị atụ.
Tags: b2bb2b ahịa ọrụọrụ ndị ahịaomume ndị ahịaahịa nchekwa dataahịa onu ahiaahịa ndụ okirikiriahịa ahịammụta miri emingwa igwengosipụta nnyochaịrụ ọrụ onweKoodu sicndị na-enyere aka mebere
Emily Johnson bụ onye na-ahụ maka ịzụ ahịa nwere afọ iri nke ahụmịhe na mmezu nke usoro azụmaahịa. Ka ọ dị ugbu a, ọ na-eduzi ngalaba na-ere ahịa na Mgbasa Ozi Blue, bụ ụlọ ọrụ ama ama ama ama ama ama ama ama nke B2B nke sitere na Irving, Texas.